DataNumen: Ikhithi Yokuthuthukisa Isoftware Yonjiniyela
I-Software Development Kit (SDK) Yonjiniyela
Ngomkhiqizo wesoftware ngamunye wokutakula idatha, futhi sinikezela ngokuhambisanayo isoftware kit (I-SDK). Abathuthukisi bangabiza i-interface programming interface (API) isebenza kwi-SDK ukulawula inqubo yokulungisa ngqo futhi ihlanganise ubuchwepheshe bethu bokuthola idatha obungenakulinganiswa nakweminye imikhiqizo yabo ye-software ngokukhululekile.
Iphakheji le-SDK lifaka amafayela we-SDK DLL, imibhalo namakhodi wesampula ngezilimi ezahlukahlukene zokusebenzisa ama-API.
Onjiniyela bangahlela ku:
IMicrosoft Visual C ++ kufaka phakathi i-C # ne .NET
IMicrosoft Visual Foxpro
IMicrosoft Visual Basic ifaka iVB .NET
Umakhi weBorland C ++
Noma yiluphi ulimi lohlelo olusekela ukushaya kwe-DLL
Kunezinhlobo ezintathu zezinhlobo zamalayisense ze-SDK:
Ilayisense Yonjiniyela: Vumela inombolo ethile yonjiniyela ukusebenzisa i-SDK ukuthuthukisa izinhlelo zabo zokusebenza. Isibonelo, uma umuntu ethenga ilayisense kanjiniyela eyodwa, kunjiniyela oyedwa kuphela ongasebenzisa i-SDK ukuthuthukisa uhlelo lwakhe lokusebenza. Sicela uqaphele yena AKUKWAZI usabalalise kabusha i-SDK DLL nohlelo lwakhe lokusebenza ngaphandle kokuthi futhi uthenge amalayisense esikhathi sokusebenza noma amalayisense angenayo imali yasebukhosini achazwe ngezansi.
Ilayisense Yokusebenza: Vumela inombolo ethize yama-SDK DLLs asatshalaliswe kabusha afakwe nohlelo Isibonelo, uma umuntu ethenga amalayisense wesikhathi sokusebenza ayi-10, lapho-ke angaphinda asabalalise amakhophi ayi-10 ama-SDK DLL nohlelo lwakhe lokusebenza.
Ilayisense elingenaRoyalty: Vumela inani elingenamkhawulo lama-SDK DLLs abiwa kabusha athunyelwe ngohlelo lokusebenza. Lokhu kufana nje nenombolo engenamkhawulo yamalayisense esikhathi sokusebenza.
Inguqulo Yokuhlola yamahhala:
Ngiyacela Xhumana nathi ukuthola imininingwane eningiliziwe noma ucele uhlobo lokuhlola lwamahhala lwephakeji le-SDK.